Italia: Ho an’ireo Tanora Tsy An’asa, na “miseho ho sarotiny” na manao sesitany ny tena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2012 2:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Català, Ελληνικά, srpski, Deutsch, polski, Español, русский, Italiano
Ny 22 oktobra lasa teo, nandritra ny vovonana nokarakarain'ny Assolombarda [amin'ny teny Italiana toy ireo rohy manaraka rehetra, raha tsy misy fanamarihana manokana], ny fikambanan'ireo fandraharahana indostrialy sy mpanao tolotra any amin'ny faritr'i Milan, dia nanambara i Elsa Fornero, minisitry ny Asa hoe : “Ireo tanora mandao ny sekoly mba handeha hitady asa dia tsy tokony ho “choosy” loatra (sarotiny), araka ny filazan-dry zareo Anglisy azy. Ny tiako holazaina dia hoe, niteny mandrakariva tamin'ireo mpanatro aho : “Raiso izay voalohany eo [tolotra], avy eo rehefa tonga ao anatiny ianareo, jereo ny manodidina anareo” .
Sary instagram avy amin'i @elisadospina, nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Generazione Choosy
Ity fanambaràna ity, anatinà vanim-potoana miavaka mampamaivay ny tsy fanànana asa, indrindra ho an'ny tanora, dia niteraka tsy fitovian-kevitra avy hatrany, noho izy noraisina ho toy ny fihetsika fanomezan-tsiny ireo tanora, izay misedra olana amin'ny fitadiavana asa satria “sarotiny”. Araka ireo angona akaiky indrindra, ny tahan'ny tsy fanànana asa ho an'ny tanora eo anelanelan'ny 15 sy 24 taona ao Italia dia 34,50% ary manodidina ny antsasaky ny tanora no tsy manana afa-tsy asa vonjimaika, izay matetika no karama vary masaka. Italia no manana ny isan-jato avo indrindra amin'ny NEET [amin'ny teny Anglisy] (“sady tsy mpianatra, tsy mpiasa, tsy mpianatra asa”) amin'ireo firenena Eoropeana, aorian'i Bolgaria sy Gresy, sy ny tahan'ny fandosirana hivelona any ivelany ary mitombo be ny azo ambara amin'ny hoe “fandosiran'ny atidoha”.
Avy eo notsindrian'ilay minisitra tsara mihitsy, nanazavàny fa “tsy niteny velively” izy hoe ny tanora Italiana no sarotiny, sy hoe “vonona izy ireny hanaiky izay asa misy eo, na dia anaty fepetra henjana tokoa aza ireo tanora.” Nanazava i Rtoa Fornero fa ny fanehoan-keviny dia miresaka ny zava-nisy tany aloha, fony mbola toetra fahita teo amin'ny tanora Italiana ny fandàvana tsy hanatanteraka asa tsy mifanitsy amin'ny fahaiza-manaony, kanefa, araka ny filazany : “tsy afaka mihitsy ny ho sarotiny ny tanora Italiana amin'izao fotoana.”
Na izany aza, tsy ampy nampitony ny resabe ilay fitondràna fanazavana, ary lasa “nalaza be” vetivety teo ilay fomba fiteny “choosy”, ampiasaina matetika ho fanesoana hanakianana ny fanambaran'ilay minisitra.
Ao amin'ny Twitter, tsy tara ireo tsilalaonteny miaraka amin'ny tenifototra #choosy (sarotiny) – toy ity manaraka ity :
@jacopopaoletti: Meteza ho noana, meteza ho #choosy. (meteza ho noana, mitomoera ho adaladala, fehezanteny malaza avy amin'i Steve Jobs)
@sergioragone: #choosy eny amin'ny lanitra, miravaka diamondra (Lucy eny amin'ny lanitra, miravaka diamondra, hiran'ny Beatles).
@taniuzzacalabra: #choosy è se vi pare (rehefa ianao no miteny azy dia izay izany , tantara an'i Pirandello)
Santionany avy amin'ny pejy Facebook an'ny tarika “Lo Stato Sociale”.
Ao amin'ny Facebook, marobe ireo mpikirakira aterineto no naneho hevitra niharo hadrohadro feno eso tamin'ilay fanambaràna. Ilay tarika mpiangaly mozika Lo Stato Sociale, ohatra, dia nampakatra andianà filalaovana lohatenin-tsarimihetsika nasiam-panovàna, boky sy hira naverina narafitra hifanaraka amin'ny “choosy” handrisihana ireo mpankafy handray anjara amin'ilay lisitra.
Mandritra izany fotoana izany, ny tranonkalan'ny Generazione Choosy (andian-taranaka Choosy) dia namorona tahirin-tsary mifandimby avy amin'ireo sary rehetra navoaka tamin'ny Instagram mikasika io resaka io.
Sary avy amin'i @idacia, mpampiasa instagram, ao amin'ny tranonkala “Generazione Choosy”.
Ny hetsika rehetra anefa dia tsy voatery ho niainga avy aminà hevitra niraisana daholo. Ny bilaogy Choosy Sarai Tu (Choosy, ianao io), dia niteraka kiana sy fiampangàna henjana be tamin'ny fitanisàna ny zavatra iainan'ireo milomano ao anatin'ny olan'ny tsy fananana asa sy ny zara raha miasa. Marobe ireo nanararaotra sy tsy nihambahamba nizara ny hatezerany tamin'ny fitantarana ny zavatra niainany, matetka dia tanora be diplaoma, saingy kely ny vintana mety hahitàny asa. Tanatin'ireo nanoratra, maro an'isa ireo tanora manana diplaoma izay, efa ho taona vitsivitsy izao, no mba nahita asa mora foana teo amin'ny tsenan'ny asa. Anatin'ireo taratasy marobe nisy nampakatra ao amin'ny tranonkala, misy iray avy aminà tovovavy, izay, efatra taona taorian'ny nahazoany diplaoma ho injeniera amin'ny asa fanorenana sy foto-drafitrasa, ary andianà fizarana asa maro sy fifanarahana ho aminà tetikasa, dia nahazo toerana aminà kabinetra teknika izay andraisany karama euro dimy ny ora iray. Misy iray ihany koa mandray euro telo ny ora iray, na dia eo aza ny diplaoma nahavitàna fianarana teny amin'ny anjerimanontolo azo tamin'ny isa 110, izany hoe ny ambony indrindra, sy ny fankasitrahana manokan'ny mpitsara, araka ny hita amin'ity taratasy misokatra eto ambany ity.
Taratasy misokatra nosoratana ho an'ny minisitra, navoaka tao amin'ny tranonkala choosysaraitu.tumblr.com
Maro tamin'ireo nandray anjara no maneho ny faniriany handositra an'i Italia, na ny faharesen-dahatr'ireo izay efa miaina sahady any ivelany izay tsara lavitra ny fepetran'ny asany: fitaratra iray amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena, izay ao anatin'izany, araka ny angona farany nataon'ny ISTA, dia iray amin'ny tanora telo no mihevitra ny handao ny fireneny.
Mifanipaka amin'izay, ny hafa indray dia manamaivana ilay adihevitra, amin'ny fanipihana ny lanjan'ny fahaizana mifankazatra sy fanipihana ny trangan'ireo tanora izay mbola misalasala ihany hanaiky asa tsy mifanaraka amin'izay andrasany. Ao amin'ny bilaogy RENA, Irene Borin dia miteny ny zavatra niainany tany Frantsa, izay nanombohany niasa ho toy ny mpitaiza zaza ary avy eo, noho ny fifanenana kisendrasendra nisy tao anatin'ny sehatry ny asa, lasa ho tomponandraikitry ny fifandraisana ao aminà vondrona banky goavana iray, asa iray izay niofanany tany Italia sy tao Frantsa :
Takatro ny antony tsy tokony hahasarotiny sy hametrahana teboka telo mifampitohy hatrany ary ny hanekena hanao mpitaiza zaza tany aloha, avy eo mpiasa an-trano. Takatro ny antony anoloran'ny minisitra na olon-dehibe iray tsotra fotsiny manoro hevitra ny tanora mba tsy ho “sarotiny” loatra, fa mba handefitra hamoritra tanan'akanjo sy hanomboka na sehatra aiza izay na aiza. Tsy ny fijanonana mihidy an-trano sy mandefa ny mombamomba anao (CV) no nahitako ny asa ataoko ankehitriny.
Farany, misy ireo izay maneho hevitra amin'ny fomba miabo, mijanona ivelan'ny resabe, nanapa-kevitra ny hanomboka ny Io Voglio Restare, hetsika iray mikendry ny handray anjara amin'ny andrana ho fanatsaràna ny mombamomba ny tontolon'ny asa ho an'ireo tanora Italiana ary mba tsy hahatonga fotsiny an'i Italia ho lasa firenena iray andosirana.